किन घट्यो मुख्य खाद्यान्न उत्पादन ? | Bishow Nath Kharel
किन घट्यो मुख्य खाद्यान्न उत्पादन ?
मुलुकको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा यस वर्ष ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । मुख्य खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापरमध्ये धान र मकैको उत्पादन घटेकाले कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ८ प्रतिशतले कमी आएको हो । यस वर्ष ढिलो तथा कमजोर मनसुनका कारण उत्पादन घट्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पश्चिम तथा पूर्वी तराईका केही जिल्लामा उत्पादन घटेको र पहाडी तथा हिमालीका अधिकांश जिल्लामा उत्पादन बढेको तथा केही जिल्लामा गतवर्षकै अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उन्नत बीउ, मल जस्ता प्रविधिका कारण यसको उत्पादकत्वमा खासै वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ र फापरजस्ता मुख्य बालीको कुल उत्पादन ९४ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन भएकोमा यस वर्ष घटेर ८७ लाख ३८ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने भएको हो । मन्त्रालयको भनाइ अनुसार गतवर्षभन्दा सात लाख २० मेट्रिक टन उत्पादन घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को तुलनामा गतवर्ष ९ दशमलव ८ प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादन बढेको थियो । मुख्यबाली धान र मकैको उत्पादनमा कमी आउँदा समग्र उत्पादनमा असर देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । गतवर्ष धानको उत्पादन १३ दशमलव ७ र मकैको उत्पादन ५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गतवर्ष बढी उत्पादन भएको भन्दै निर्यातका लागि समेत अनुमति दिइएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ८ प्रतिशतले गिरावट आउने भएको छ । ढिलो तथा कमजोर मनसुनका कारण यो वर्ष धान उत्पादन गतवर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान छ । मुख्य बाली धान र दोस्रो बाली मकैको उत्पादनमा कमी आउने भएपछि कुल उत्पादन नै घट्ने देखिएको हो । यो वर्ष मकै बालीको उत्पादनमा पनि ८ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान रहेको छ । खाद्यान्न बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल समेत गतवर्षको तुलनामा करिब १ लाख ४० हजार हेक्टरले घटेर ३३ लाख ४४ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । पूर्वी जिल्लामा गहुँ बालीको क्षेत्रफल घटेका कारण कुल उत्पादित क्षेत्रफलमा कमी देखिएको छ । गतवर्षको ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टनबाट घटेर देशको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन करिब ४५ लाख ४ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । मकै गतवर्ष २१ लाख ८० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यो वर्ष १९ लाख ९९ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने अनुमान छ । गहुँको उत्पादनमा यस वर्ष २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षमा समयमा हिउँदे वर्षा भएकाले पनि उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ७ लाख ५९ हजार ८ सय ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा १८ लाख ८२ हजार २ सय २० मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ, यसवर्ष उत्पादकत्वमा प्रतिहेक्टर २ हजार ४ सय ७७ केजी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ६५ हजार २ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा १८ लाख ४६ हजार १ सय ७ मेट्रिक टन गहुँको उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष अधिकांश पूर्वी तराईका जिल्लामा गहुँ बालीको क्षेत्रफल घटेका कारण समग्र क्षेत्रफलमा समेत केही कमी देखिएको छ । कोदो बाली अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतले कमी आई ३ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मात्र रहने प्रारम्भिक अनुमान छ
कोदो बालीमा उन्नत बीउ, मलजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने चलन कम भएका कारण यसको उत्पादकत्वमा खासै वृद्धि हुन नसकेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै जौको उत्पादनमा भने ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, गतवर्ष २७ हजार ८ सय ७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३४ हजार ७ सय ३६ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ६ प्रतिशलते उत्पादनमा वृद्धि भई ३६ हजार ९ सय ७३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । यसवर्ष जौको क्षेत्रफल ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्षदेखि खाद्यान्न बालीमा फापरलाई समेत समावेश गरिएको छ । केही हिमाली क्षेत्रमा मुख्य खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको फापरलाई गत २ वर्षदेखि राष्ट्रिय तथ्यांकका रुपमा समावेश गरिएको हो । यस वर्ष १० हजार ६ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा १० हजार ५६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा ९ सय ४२ केजी रहेको छ । देशका करिब ५० ओटा जिल्लामा फापरखेती गरिँदै आएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिकूल मौसमका कारण धानको उत्पादन बढ्न नसक्दा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको हो कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष धानको उत्पादन गतवर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत कमी आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष कुल खाद्यान्नमा ७ लाख २० हजार मेट्रिक टन कमी आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष धानको उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएकाले पनि कुल खाद्यान्न उत्पादन ८ प्रतिशतले कमी आएको हो । अघिल्लो वर्ष ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष ११ प्रतिशतले घटेर ४५ लाख ४ हजार मेट्रिक टन भएको थियो । लगातार धानको उत्पादन वृद्धि हुँदै आएकोमा यस वर्ष समयमा मनसुन सक्रिय हुन नसक्दा उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । त्यस्तै गरी मकै बालीको उत्पादन गतवर्षको तुलनमा करिब ८ प्रतिशतले घट्न गई १९ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।